Fiction bhuku rekuongorora
Fiction bhuku kuongororwa uye kutsoropodza
VaWilder neni naJonathan Coe
Mukutsvaga nyaya inotaura nezvechadenga icho chinoitika muukama hwevanhu huchangotanga, Jonathan Coe, kune divi rake, anobata nekunaka kweruzivo rwekutanga. Ehezve, Coe haagone kusiya iyo yakadzama kukosha iyo yaanogadzirisa nerondedzero yakakwana. Kubva…
Kuvhiringidzika, naRichard Powers
Nyika haina kumira zvakanaka nekudaro nyonganiso (ndine hurombo nekuseka). Dystopia yave kusvika nekuti utopia yaigara iri kure kune budiriro seyedu iyo inowedzera exponentially muhuwandu sekuzivikanwa kwakajairika kunoderera. Individualism inoberekwa kuva. ...
Nhare yeBarbazul, naJavier Cercas
Iro gamba risingatarisirwe zvakanyanya remutikitivha rudzi anotarisa mugirazi reVázquez Montalbán. Nekuti Melchor Marín kuzvarwa patsva, nekusiyana kwayo kwenzvimbo-nguva-yechirongwa, yaPepe Carvalho uyo akatitungamira nemumahofisi akasviba kana pakati pehusiku hwakasviba zvakanyanya muBarcelona. Javier Cercas anowedzera ...
Nhaka yaMaude Donegal. Mwanakomana Anopona: Manovhero maviri Akavanzika, naJoyce Carol Oates
Kune vanyori vanodarika rudzi rwavanosvitswa kwarwuri mune rimwe nerimwe remabhuku avo matsva. Iyi ndiyo nyaya yeOates uye inoitika neiyi paki yekufemerwa kwakashata asi iyo inofungidzira nzira yese kune yekupedzisira chiyero cherufu, kune kuedza kwekutaurirana pamweya neavo vano ...
Passionate Dictionary yeBlack Novel, naPierre Lemaitre
Rudzi rwenoir nhasi nderimwe remabhesheni akasimba ezvinyorwa zvemazuva ano. Mhosva kana nyaya dzepasi, nzira dzekuenda kumahofisi akasviba anotonga masiweji ane mukurumbira, mapurisa kana vaongorori vanosiya ganda ravo kuti vagadzirise nyaya dzinonyanya kunetsa. Uye Pierre Lemaitre ndomumwe weavo ...
Murimi weGadheni, Muvezi uye Mupoteri, naCésar Aira
Munyori wese anozviremekedza anofanira kutarisa basa iri rinokanganisa, kwete mubasa rake chete, asi muhuwandu hwezvinyorwa. Uye César Aira aisazove mudiki nekuti iyo avant-garde ndeye standard. Uye hazvina kushata zvachose ...
Imbwa dzakatarisa mudenga, naEugenio Fuentes
Sezvo Ricardo Cupido akazvarwa semunhu mukutanga 90s, rwendo rwake kuburikidza nemhosva dzehutsotsi hwakaita kuti gamba redu rive chimwe chezvinhu zvakakosha mubasa remapurisa reIberia. Iyo yeSpanish dema genre, seItalian kana zvakare French, inonatswa ne ...
Bhuku rerudo rwese, rakanyorwa naAgustín Fernández Mallo
Zvinyorwa zvine mukana wekutiponesa. Haisisiri nyaya yekufunga nezvemaraibhurari uko vana vevana vedu vanogona kubvunza pfungwa, sainzi uye ruzivo rwakaiswa mumabhuku semvumo yeshanduko isingadzivisiki. Tinoziva kuti hapana chichasara nokukurumidza. Ndicho chikonzero ...
Peji1 Peji2 ... Peji131 Zvadaro →